ကယားနှင့် ကရင်နီ အခေါ်အဝေါ် | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင်ကာ
ကယားနှင့် ကရင်နီ အခေါ်အဝေါ်	Posted by mm thinker on August 3, 2008
Posted in: Anthropology, Dialogue, Experience, Knowledge, Research.	Tagged: Anthropology, Karenni, Kayah, Knowledge, Research.	1 Comment
ဒါကြောင့် သူတို့ဟာ ကယားဆိုတာကို မကြိုက်ဘူး။ ကရင်နီဆိုတာကိုပဲ ကြိုက်ပါတယ်။ ကရင်နီလူမျိုးစုထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ မျိုးကွဲတွေကတော့ (၁) ကရင်နီ၊ (၂) ဂေခို၊ (၃) ဂေဘား၊ (၄) ကယန်း၊ (၅) ပရဲ့၊ (၆) မနုမနော၊ (၇) ယင်းဘော်၊ နဲ့ (၈) ယင်းတလဲ တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။
← ပုဂံနဲ့ ပုပ္ပားဇာတ်လိုက်များ	Existence Magazine – Vol.1, Issue.4 – Download →	One comment on “ကယားနှင့် ကရင်နီ အခေါ်အဝေါ်”